Myanmar Defence Weapons: F12 KyanSitThar Guided Missile Stealth Frigate
Posted by MM at 6:45 AM
Htat aung zaw January 6, 2016 at 11:39 AM
Htat aung zaw January 6, 2016 at 11:40 AM
Unknown January 6, 2016 at 3:39 PM
​ကျေးဇူး ပါ ငယ်​ချင်​သိခွင့်​ရလို
Lintun အာပူးကျိ January 6, 2016 at 3:40 PM
Falcon January 6, 2016 at 7:16 PM
Floating dock ရဲ့ နာမည်က ဆရာ ရှမ်း လို့ ပဲ သိထားတာ ဆရာစံက နောက်တစ်စီးလား
MM January 10, 2016 at 7:25 AM
ဟုတ်ကဲ့ ကျနော်အမှတ်မှားသွားလို့ပါ၊ ပြန်ပြုင်ထားပါပြီ ကျေးဇူးပါ :)
U lay aung January 7, 2016 at 1:35 AM
ျReturn of Ko MM.
hla min January 7, 2016 at 8:40 AM
ဆက်ရေးပါ။ စိတ်ဝင်စားဖို.ကောင်းပါတယ်။ စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ တပ်ဆင်ထားတဲ့ လက်နက်စံနစ်တွေကတစ်ဆင့် နိုင်ငံရဲ.ကာကွယ်ရေးမူဝါဒ ချမှတ်တဲ့သူတွေရဲ. စစ်ရေးအမြင်နဲ. အရည်အသွေးတွေကို တိုင်းတာ အကဲဖြတ် လို.ရတာပေါ့။
zaw khine January 9, 2016 at 8:25 AM
Music Video ကို You Tube မှာတွေ့တယ် F 12 မှာ Rocket Depth Charge, Depth Charge နဲ့ Hull mounted sonar ပါ ပါတော့ ASW အတွက်က မဆိုးပါဘူး ASW Helicopter လေးပါ သုံးနိုင်ရင်တော့ Perfect ပေါ့ နောက် Defensive ပိုင်းကလဲ AK 630×3, Igla နဲ့ Flare တွေပါတော့ အတန်အသင့် စိတ်ချရပါတယ် Electronic Jammer ကောင်းကောင်းထားနိုင်ရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့ 2D ရေဒါများသာမက 3D ရေဒါများပါ တပ်ဆင်၍ Long Range SAM များပါအသုံးပြုထားသော Ageis Frigate မျိုးပါ တိုးတက်ပိုင်ဆိုင်ပါစေကြောင်း
Ko Htet Aung Soe January 9, 2016 at 9:12 AM
F 14အ​ကြောင်း​လေးတင်​​ပေးပါလား ကိုMM
MM January 10, 2016 at 7:26 AM
Winn Minn Thein January 10, 2016 at 1:17 AM
maung mg January 28, 2016 at 1:02 PM
အမြဲတမ်း မဟုတ်ပေမယ့် အချိန်ရတိုင်း ဖတ်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းတော့ ၀င်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ အသစ်လေးတွေ့ရင် Bookmark လုပ်ထား အားပြန်ဖတ်ပေါ့။ တတ်နိုင်သမျှဘက်မလိုက်ဘဲ အားထုတ်ထားတာတွေ့ရလို့လည်း ကြိုက်ပါတယ်။ အခုလို အများသိနားလည်အောင် ရှင်းပြပေးတာလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီထက်လည်း ပိုပြီး တိုးတက်အောင်မြင်အောင် လုပ်နိုင်ပါစေ။
mal kuwon February 23, 2016 at 12:05 PM
76 mm main gun ကမသေးလွန်းဘူးလား?
koko Gyi March 26, 2016 at 1:12 AM
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် က ဂျာမနီက နဲ့ အင်္ဂလန် တို့ စစ်ဖြစ်တော့ ဂျာမနီ က ရေငုတ်သဘောင်္ ရာ ကျော်
စစ် သဘောင်္ 800 ကျော် လေယဉ် ပေါင်းမြောက်များစွာ နဲ့ကို စွာခဲ့ တယ် ။
((((((( ဘယ်တော့မှ စစ်လက်နက် အင်အားနဲ့ ပက်သက်ရင် ဘယ်တော့မှ မရောင့်ရဲ ကြနဲ့ ))))))
Unknown February 8, 2017 at 1:03 AM
What Depth charge model is used by Myanmar Navy? Pardon me for commenting in English,i haven't installed unicode.